Ukupheka kwe-Ultrasonic: Abxube & Ungadliwa - Hielscher Ultrasound Technology
Abakwa-Ultrasonictors banamahlanganisi anamandla nama-homogenizers, okungafakwanga nesicelo kumabhrikhi nasembonini. Kusukela eminyakeni embalwa, abakwa-ultrasonicators baye bathola indlela yabo yokuya emakhishi amancane, futhi. Izindawo zokudlela ezidumile ze-star-arwarded arwarded, amagugu amancane okudla okuhle kakhulu, isikole sokupheka kanye nabapheki be-amateur basebenzisa ama-ultrasonic amadivayisi ukuze bahlole izakhi zamakhemikhali ezakha izitsha eziyingqayizivele. Thola ngezansi izinto eziyisisekelo zokupheka kwe-ultrasonic futhi uphefumulelwe izindlela zokupheka ze-ultrasonic!
Kule vidiyo, kukhishwa i-ultrasonic kusuka kuma-hops (humulus lupulus). Nge-ultrasonicator UP200Ht caryophyllene namanye amakhambi akhishwa.
Isizinda se-Ultrasonic se-Hops nge-UP200Ht nge probe S2614
Izindlela Zokupheka Ezinezici Ne-Ultrasound
Chofoza kumaphoyinti e-bullet ngezansi ukuze ufunde amathiphu amaningi namasu mayelana nokuthi ungadala kanjani izitsha eziphefumulelwe nge-ultrasonically!
Ikhofi - I-Cold Brew
Amagagasi e-ultrasonic asetshenziselwa ukuhlanganiswa okuqinile-okumanzi kuyindlela enamandla futhi ephumelelayo yokukhipha. Zama ukubandisa-uphuza ikhofi yakho ikhofi nge-ultrasound! Kuye ngamandla ofuna ukuyifinyelela, engeza amathisipuni angu-1-2 (noma ngaphezulu) we-powder ekhomisiwe ekhofi enkomishini yamanzi abandayo bese ukhuluma naye. Susa i powder ikhofi emva kwalokho ngokusebenzisa filtration ngokusebenzisa coffee ikhofi lemifanekiso. Uma udinga ikhofi njengokupheka noma isithako sokupheka, sisebenzise kubanda. Uma ufuna ukuphuza, ungase uwushise kancane. Jabulela indebe yakho yekhofi!
Ukuze uthole isizinda esengeziwe sesayensi ultrasonic caffeine isizinda, funda kabanzi lapha!
Iwayini, imimoya, iziphuzo
I-Ultrasound ikunika ithuba lokuba udala iwayini, i-cider, imimoya neziphuzo eziphuthumayo ngokushesha. Kungakhathaliseki ukuthi unika iwayini elimangalisayo noma umoya okhaliphile ukuze usebenzise ukunambitheka noma ukunambitheka iwayini noma ukuphuza utshwala ngokuyibeka nge-eg oak chips.
Ngaphandle kokuguga, ama-ultrasonicators ethu afaneleka ukwenza izidakamizwa ezidakayo. Vele ufake isithako sakho sokunambitheka, isib. I-lavender, i-chips yama-orange, i-chili echotshoziwe ku-booze yakho (isib. I-vodka, i-rum emhlophe) bese unikeza ingxube – ikakhulukazi ekugezeni kweqhwa ukulawula ukushisa. Ngemuva kokuba indodanaication isuse izinhlayiya eziqinile ngokuhlunga. Ukulungele uketshezi olwenziwe ekhaya olwenziwe ekhaya!
Ukuze uthole isizinda esengeziwe sesayensi i-ultrasonic iwayini eliguga, funda kabanzi ngokuchofoza lapha!
I-Shrimp Stock - Recipe ye-Michelin Star Chef Sang-Hoon Degeimbre
Ukuze kulungiselelwe indalo yakhe i-Ultrasonic Shrimp Stock, i-2-Michelin Star inikezwe umpheki we-Sang-Hoon Degeimbre (L'Air du Temps, eBelgium) i-sonicates zonke izithako (ama-shrimps, amanzi, utamatisi puree, isanqante, usawoti) ngama-50% amplitude imizuzu engu-10.
Sang Hoon Degeimbre: Umpheki wezinkanyezi ne-ultrasonicator yakhe I-UIP1000hd
125 amagremu ama-gray shrimp
1.5 amalitha amanzi
1 isipuni utamatisi puree
1/2 isanqante, eqoshiwe
1/4 ithisipuni usawoti
Ukukhiqiza: 1.5 amalitha
Bhaka ama-shrimp ku-130 ° C imizuzu engu-20. Beka zonke izithako ebhodweni elikhulu. Setha idivayisi (i-Hielscher I-UIP1000hd, I-B2-1.8, i-BS2d22) ukuze ikhuliswe ngamaphesenti ama-50% imizuzu engu-10. Hlanganisa, ubunzima, futhi unciphise ukuvumelana okufisayo.
Ukuze ubuke ividiyo ka-Sang-Hoon Degimbre, sicela uchofoze lapha!
Gravy and Marinades
Sonication inikeza emulsification kanye ukunambitheka isizinda ukuthuthukisa gravy yakho, sauce noma marinade.
Isibonelo: I-Red Wine Gravy
Izipuni ezingu-4 zancibilikisa amafutha e-duck
Iwayini elibomvu elingu-200mL
4 wezipuni port
Imitha yemifino engu-500mL
Beka izithako epanini bese uvumela ingxube yexube imizuzu embalwa. Gcwalisa i-gravy ku-beaker uphinde uhlanganyele u-60 – 90 amasekhondi. Gxila emgodini bese uphinde uphinde uphinde uphinde usebenzise iphuzu lokubilisa.
I-Ultrasound yaziwa kakhulu ngemiphumela yayo evelele yesikhumba. Faka ama-herbs, amaqabunga, noma izimbali eketsheni lakho olifunayo (isib. Amanzi, utshwala, amafutha). Ukuze uthole isizinda se-ultrasonic esithuthukisiwe kunconywa ukuba i-macerate impahla yokutshala njengezinhlayiya ezincane zithinteka ngokuphelele yi-ultrasound. Sonicate, filtrate – ukulungele ukumnika kwakho!
I-oyela iyinhlangano enhle kakhulu ye-flavour carrier futhi ngaleyo ndlela ilungele ukuwafaka nge-flavour ultrasonically ekhishwe. Engeza izithako ozifisa ama-flavour bese uhambisa amafutha. Izithako ezifanelekayo ziyi-raspberries,
Hambisa i-probe ye-ultrasonic emafutheni ukuze izingxenye zezitshalo zizithinteke ngokufanayo ngamagagasi e-ultrasound.
I-Ultrasound yindlela eqinisekisiwe kahle yokudala imulsion ezinzile. Njengoba i-ultrasonic cavitation amaconsi emfucumfucu we-micron- no-nano-size, ukuhlanganisa iziphuzo ezingenakudliwa njengamafutha namanzi ndawonye. Ngenxa yokusebenza kwayo emulsion evelele, i-ultrasound isetshenziselwa ukulungiswa kwama-vinaigrette, ukugqoka, amasoso kanye nama-gravies.
I-400mL ye-vinaigrette yama-vinegar (i-W / O): Faka i-sonotrode ku-beaker ngamafutha bese ushintsha idivayisi ye-ultrasonic. Engeza i-vinagre kancane kancane emafutheni (isibonelo isilinganiso 1: 3). Ukuze uthole imiphumela emihle, ungasebenzisa i-syringe bese ujova uviniga ngqo endaweni enkulu ye-cavitation ngaphansi kweprobefu. Sonicate ingxube engxenyeni. 20-40 isekhondi. Kunconywa ibhuku lokuphuza icebo lokupholisa. Amaconsi amaviniga azofakwa ngaphakathi kwesigaba samafutha ukuze ukunambitheka kwamafutha kuyoba okubaluleke nakakhulu. Uma ufuna ukunambitheka okuvinjiwe okuviniga, landela inqubo engezansi.
I-400mL ye-vinaigrette yamafutha (i-O / W): Faka i-sonotrode ku-beaker ngamafutha bese ushintsha idivayisi ye-ultrasonic. Engeza amafutha kancane kancane kuviniga (isibonelo isilinganiso 1: 3). Ukuze uthole imiphumela emihle, ungasebenzisa i-syringe uphinde ujobe amafutha ngokuqondile endaweni enkulu ye-cavitation ngaphansi kweprobefu. Sonicate ingxube engxenyeni. 20-40 isekhondi. Kunconywa ibhuku lokuphuza icebo lokupholisa. Amaconsi amafutha ayofakwa ngaphakathi kwesigaba sokuviniga ukuze uviniga ujule kube yi-flavour evelele.
I-Ultrasonic Nano-Emulsions: Le vidiyo ikhombise ukukhiqizwa okusheshayo kwe-nano-emulsion kawoyela emanzini. I-UP200Ht homogenisa uwoyela namanzi ngemizuzwana.
I-Ultrasonic Emulsifying nge-UP200Ht nge probe S26d14
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonic emulsification futhi mayelana nemiphumela yayo ku- ukukhiqizwa kwegargarine!
izithelo & Ama-Purees Emifino
Mash imifino noma izithelo ozikhethele ku-puree. Uma i-puree inkulu kakhulu, ungangezela amanzi, ubisi noma amafutha. Bese ukhulume nge-mash ngokuhambisa i-probe ye-ultrasonic engxenyeni ye-even treatment. I-ultrasound iphula amangqamuzana futhi ikhulule wonke ama-flavour, izakhi kanye noshukela kusuka kumaseli. Ngalokho, a ukunambitheka okukhulu futhi ukuthungwa okukhulu, okubushelelezi kufinyelelwa. Njengoba yonke isiliva ebanjwe ushukela yemvelo ikhiphelwa yi-sonication, ukungezwa kokushukela okudayisa noma ukunambitheka okufakelwayo kungagwenywa ngokuphelele, okubaluleke nakakhulu ukuze i-smoothies nezithelo ezihlanzekile.
Isibonelo: isobho lempumpu
500gr of ithanga elibiwe bese ufaka 500mL yemhluzi yemifino, 2 tblsp ukhilimu kanye nezinye izididi. Sonicate ingxube ye-3-4 min. Ukuze uthole ngisho ne-sonication nokukhululwa okuphezulu kwezidakamizwa, ukugqugquzela kahle kunconywa.
Hlanganisa i-isikhupha samaqanda 1 ngesinci sikasawoti, engeza i-1 tsp. lwesinaphi. Sonicate ingxube bese wengeza kancane 8 tblsp. yamafutha, 1 tblsp. of ijusi kalamula, ezinye izitshalo kanye pepper. Ukugeza kwe-ice okupholisa ukupholisa nokunciphisa kancane kunconywa ukuthola i-emulsion epholile, ezinzile.
Ama-oysters amaqabunga avame ukukhonzwa nge-vinaigrette noma i-mignonette shallot kuze kufike isikhathi sokudla okumnandi kwe-shellfish. I-recipe ngezansi yenza i-vinaigrette enhle kakhulu yezingqimba ukuthi izinkathi zincithakalo ezinamahloni ezinhlobonhlobo ze-oysters, zikhonjwe ngokweqile kwi-halfshell.
Izithako: ¼ indebe (60ml) yewayini elimhlophe, ½ indebe ye-shallots (ama-2½-3 ama-ounces = 2½ -3 ama-shallots amancane), i-¼ indebe (60ml) i-rice uviniga omhlophe ongabonakali, i-1/8 isipuni sikasawoti, 1/8 isipuni ushukela, 1 ½ amathisipuni ama-peppercorns asanda kuchotshozwa, ukumiswa kwelamula, ukuhlobisa: ama-chives aqoshiwe, okukhethwa kukho: izipuni ezintathu ze-saumoni
Ikomishi elimpofu ¼ leviniga elimhlophe no-¼ indebe ye-rice i-rice e-white beer ingilazi engilazi (okungenani ngobubanzi buka-2.8-3.9in / 8-10cm). Faka i-beaker engilazi ngeviniga emanzini abandayo noma ebhodini lokugeza. Faka i-UP200Ht nge-sonotrode S26d40 futhi unikeze kancane kancane amanzi oketshezi ku-50% ukulinganisa kwamamitha angu-20, ukuhambisa i-sonotrode ngobumnene ku-liquid ukuze kuqinisekiswe ukwelashwa ngisho ne-ultrasonic. Misa okwesikhashana ngo-30sec bese uphinda inqubo ye-sonication ye-20sec.
I-ultrasonication yeviniga ibangela ukunambitheka okulula, okuyi-rounder njengoba i-acidity yeviniga iyancipha.
Gweba ama-shallots bese uwasika kahle. Yengeza ama-shallots amaminerali, i-pepper esanda kuchotshozwa, ushukela nosawoti ku-beaker yeglasi bese uyigqugquzela nge-spoon.
Yenza kahle ingxube ye-amplitude engu-50% ye-30sec ngenkathi uhamba kancane nge-sonotrode.
Gcoba i-vinaigrette esiqandisini ebusuku. Ngaphambi kokukhonta ugqugquzela i-vinaigrette shallot ukuze ususe izidumbu.
Lungisa imililo yaseFrance ephoqelekile – njengoba kwaziwa kusukela ku-Modernist Cuisine – usebenzisa idivayisi yakho ye-ultrasonic probe-type. Okokuqala, nikeza amazambane akho asanda kumiswa afaka amafry amancane emafutheni ashisayo. Esigabeni sesibili, ukhulume amafriji ngamandla. Qinisekisa ukuthi ugqugquzela amafriji emafutheni manje ukuze ama-ultrasonics afinyelele kuwo wonke amafriji. I-cavitation ye-ultrasonic ikhiqiza ama-fissures angabonakali futhi ihlakaza amaseli amazambane ukuze isitashi sitholakale. I-starch ekhishwe yenza ama-mbatata angaphezulu kwe-crispy. Ngemuva kokubeletha, unike amafrimu aseFrance okwesikhashana ukwelashwa okuthosiwe kuze kube yilapho igolide neyinkimbinkimbi. Abasuse emafutheni othosiwe bese bedonsa ithawula lephepha.
Jabulela i-crunchy yakho isitashi-singene Fries french nge kettop ultrasonically elungiselelwe kanye imayonnaise!
Inyama - Ukubonisana & Ukushada
Nge-ultrasound ungakwazi ukuthambisa futhi uhambise inyama yakho ngaphakathi kwesibili. Khombisa izibopho zakho zenyama ngokuqondile noma uzibeke ku-marinade. Faka i-amplitude esebenzayo futhi usebenzise uphondo olukhulu lwe-ultrasonic. Hambisa uphondo lwe-ultrasonic kancane kancane phezu kwamapheshana. I-ultrasound iyancipha i-filament iphinde ivule ama-pores ukuze i-marinade ingene ngaphakathi ngokushesha.
Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic ye-Xanthan Gum
Ama-ultrasonicators afanele ukuxuba abaqhwayi kanye neziqu ezinjenge-hydrocolloidal xanthan gum kanye ne-guar gum zibe zokupheka. Njengoba i-ultrasonics idala amandla amakhulu we-shear, ngisho nama-powders okungenakuhlukumezeka futhi athambekele ekuhlanganiseni, angahle ahlangane ngokulinganayo. I-Xanthan i-gum ne-guar gum ikhuphuka ngokushesha kakhulu, okwenza kube nzima nakakhulu ukubangele ekubunjweni. Ukuxuba i-Ultrasonic kukunika umxube kakhulu futhi omuhle ukuze i-xanthan noma i-guar gum powder ikwazi ukufaka izinto zayo ezigcwele. Lokhu kukusiza ukuba usebenzise kancane ukuqina kwe-gum powder. Engeza i-xanthan noma guar kancane kancane ngaphansi kwe-saication noma i-gravy. Hambisa iphenyo le-ultrasonic ku-beaker ukuze uqiniseke ukuthi i-powder i-sonicated ngendlela efanele futhi ixutshwe kahle ketshezi. Uma uvala idivayisi ye-ultrasonic, ungakwazi ngokushesha ukubona umphumela wokuqina.
Uma ufuna ukwakha i-xanthan foam, vele ukhethe iphrobhethi ene-tip ebanzi ubukhulu bese ususa iprobhethi ye-ultrasonic ekumiswe kwe-liquid kanye ne-xanthan gum phezulu nangaphansi. Noma nini lapho i-probe isesibusweni (cishe ngaphesheya kwe-liquid surface) ketshezi, ama-bubbles emoyeni ayabanjelwa, ukuze i-espuma elula ifakwe.
I-Ultrasonic Vinegar Ukuguga
Ngokufanayo nokuguga kwe-ultrasonic yewayini nemimoya, futhi ama-vinegars angaba neminyaka emihle ekhulile yi-ultrasound. Nciphise ubuhle obuhle obubukhali kanye nobunzima bamavinigagasi abasha abonisa uviniga okwesikhashana. Ukwengeza, ungakwazi ukunika umgqomo owenziwe ngama-flavour wokukhetha kwakho, isib. U-oak, amakhambi, isilili, noma izithelo ezifana ne-raspberries. Engeza umnikelo ovuthiwe noma owenziwe nge-macerated flavoring kuviniga bese ukhuluma naye. Njengoba isikhathi eside ukwelashwa kwe-ultrasonic, ukukhishwa okukhulu kwe-flavour kuya kakhulu. Vele ungahambisani nalokhu-uvumele ukuvimbela ukungcoliswa kwezinsiza. Hlanganisa iphepha lokuhlunga.
Ukuze uthole isizinda esengeziwe sesayensi ultrasonic uviniga ukuguga, funda kabanzi ngokuchofoza lapha!
Ububanzi bomkhiqizo obanzi bukaHielscher lunikeza ama-ultrasonicators amancane ukuze asetshenziswe ekhishini elizimele labapheki abathanda ukuzimisela kanye nama-homogenizers amakhulu e-ultrasonic abapheki abaqeqeshiwe kakhulu kanye nekhishini elikhulu le-gastronomy.
Sitshele inhloso yakho – Siyajabula ukukutusa wena idivayisi efanelekayo!
UChristmas Mittermeier we-Michelin star-award awarded Villa Mittermeier nge UP200Ht ukulungiselela i-emulsion ye-ultrasonic
Ultrasonically walungisa ikhukhamba emulsion
Khuluma nathi mayelana nezidingo zakho zokucubungula! Sizoyincoma idivayisi efanelekayo yokwenza kwakho.
Ultrasonics for Gourmet lokuphekiwe